गुडिरहेकै गाडीको सिटमा यात्रा गर्दा गर्दै अस्ताए लालबहादुर तर पत्तो पाएनन् कसैले – Sandesh Press
November 8, 2021 188
काठमाडौं : पश्चिम रुकुमको बेसिकोट नगरपालिका ८ पटला गाउँकि धर्म कुमारी पटेलाको मृ,त्यु गाडीमा सवार गर्ने क्रममा बसको सीटमै भएको थियो। काखमा सानो छोरालाई दूध खुवाउँदा खुवाउँदै गर्दा उनको मृ,त्यु भएको थियो। अहिले यी नै महिलाको घरमा गएर जिटीभी नेपालले आफ्नो भिडियो रिपोर्टिङ गरेको छ। उनै बालक हुन् जो गाडीमा यात्रा गर्ने क्रममा आमाको मृ,त्यु भैसकेपछी पनि मस्त निदाइरहेका थिए।
उनलाई अहिले आमा नभएपछि फुल्याउन निकै गाह्रो भैरहेको छ।उनी दिनरात आमा खोज्दै रुने, चि’च्याउने गरिरहेका छन्। उनका अर्का छोरा १३ वर्षका भए। उनले त्यसदिन आफ्नी आमाको मृ,त्युपश्चात उनको ठूलिममीले भनेपछि मात्रै थाहा पाएका थिए। आफू सामान्य बिरामी भएको खबर कामले नेपालगन्ज गएका श्रीमानलाई पुर्‍याउछिन ! श्रीमानले गाउँको मेडिकलमा उपचार गर्ने सल्लाह दिन्छन् !केही मानिसलाई कार वा बसमा लामो यात्रा गर्नाले उल्टी आउने र वाकवाकी लाग्ने समस्या हुन्छ । यस्ता मानिसहरु अन्य कुनै खालको बिरामी भएका हुँदैनन् तर जब उनीहरु कहिँ जानको लागि बस वा कारमा बस्छन् भने चक्कर लाग्न थाल्छ, वाकवाकी लाग्न थाल्छ र उल्टी हुन्छ । मानिसहरुलाई घुम्ने धेरै सौख हुन्छ तर गाडीमा उल्टी हुने डरले धेरैले आफ्नो घुम्ने सोचलाई नै त्यागिदिन्छन् । ‘मलाई घुम्न धेरै मनपर्छ तर यात्रामा हुने बान्ता बा उल्टीको कारणले आफ्नो यो सोखलाई पुरा गर्न सक्दिन ।’ ‘खास गरेर म आफ्नो यो समस्याको कारणले पहाडमा घुम्न जान पाँउदिन ।’ गाडीमा उल्टी हुने समस्याले गर्दा धेरैले यस्तै पीडा व्यक्त गर्छन् । अझै
धेरै जसो मानिसहरुलाई पहाडी बाटोमा यात्रा गर्दा यो समस्या धेरै देखा पर्छ । यसले उनीहरुको यात्रा सुरु हुन भन्दा पहिले नै खराब हुन्छ । मानिसहरुलाई घुम्ने धेरै सौख हुन्छ तर गाडीमा उल्टी हुने डरले धेरैले आफ्नो घुम्ने सोचलाई नै त्यागिदिन्छन् । तपाईलाई पनि यस्तै समस्या छ भने आज हामी तपाईलाई केही टिप्सहरु दिन गइरहेका छौं जसलाई अपनाउनुभयो भने तपाईले यो समस्याबाट तुरुन्त छुटकारा पाउनुहुन्छ । अपनाउनुहोस यस्ता उपायः १.प्याजको रस यात्रामा हुने उल्टीबाट बच्नको लागि यात्रामा जान भन्दा पहिला १ चम्चा प्याजको रसमा १ चम्चा अदुवाको रस मिसाएर खानुहोस । यसले तपाईलाई यात्राको समयमा उल्टी आँउदैन तर यदि यात्रा लामो छ भने यो रसलाई बनाएर साथमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ । २. ल्वाङको जादू यात्राको समयमा जब तपाईलाई जब वाकवाकी लागेको महसुस हुन्छ तब तपाईले तुरुन्तै आफ्नो मुखमा ल्वाङ राखेर चुस्नुहोस् । यस्तो गरेपछि तपाईलाई वाकवाकी लाग्न बन्द हुन्छ । ३.अदुवा सेवन अदुवामा एन्टिमेटिक गुण हुन्छ । एन्टिीमेटिक एक यस्तो पदार्थ हो जसले उल्टी र चक्कर आउनबाट बचाँउछ ।
यात्राको समयमा वाकवाकी लागेपछि तपाई अदुवाको गोली वा अदुवाको चिया पिउनुहोस । यसले तपाईलाई उल्टी हुँदैन् । यदि हुन सक्छ भने अदुवा आफ्नो साथैमा लिएर हिड्नुहोस् । ४.धेरै नै लाभदायी पुदिना पुदिनाले तपाईको पेटको मांसपेशीहरुलाई आराम दिन्छ र यसखालको चक्कर आउने र यात्राको समयमा स्वास्थ खराब हुने स्थिती पनि समाप्त गर्छ । पुदिनाको तेलले पनि उल्टी रोक्न धेरै नै मद्धत गर्छ । यसको लागी रुमालमा पुदिनाको तेललाई
केहीबेर छर्कनुहोस र यात्राको बेतामा त्यसलाई सुँघ्नुहोस । सुख्खा पुदिनाको पत्तालाई तातो पानीमा मिसाएर यसमा १ चम्चा मह पनि मिसाउनुहोस । कतै यात्रामा निस्कनभन्दा पहिले यो मिश्रणलाई पिउनुहोस । यसले तपाईलाई धेरै नै आराम मिल्नेछ । ५. कागतीको कमाल कागती एक प्रभावकारी औषधी हो यसमा पाइने सिट्रिक एसिडले उल्टी र वाकवाकी लाग्ने समस्या रोक्छ । एक सानो कपमा तातो पानी लिनुहोस र त्यसमा एउटा कागतीको रस तथा थोरै नुन मिसाउनुहोस् । यसलाई राम्रोसँग मिसाएर पिउनुहोस् । अथवा तपाई कागतीको रमलाई तातो पानीमा मिसाएर तथा मह राखेर पनि पिउन सक्नुहुन्छ ।
Prevलामोसमयपछि चलचित्रमा फर्किए प्रशान्त तामाङ, सम्पदासँग जोडी बाँध्दै
Nextमोटि युवतिले जबरस्ति यौन सम्प।र्क गर्दा थिचेर यु वा को मुर्त्यु भयो ??
पेट्रोल हाल्न सकिएन,बाइक बिक्रीमा !